Ekugqibeleni, Impembelelo ngegama elingundoqo | Martech Zone
Ekugqibeleni, Impembelelo ngegama elingundoqo
NgoLwesibini, Meyi 3, 2011 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
namhlanje mBlast baqalise ingxelo entsha, yasimahla yesisombululo sabo se-mPACT. I-mPACT yenzelwe ukusuka emhlabeni ukuya kunceda abasebenzisi ukuba bafumane amazwi anempembelelo kwintengiso yabo zizinto abazithethayo kwiiblogi, amanqaku akwi-intanethi, i-Twitter, i-Facebook nakwezinye iindawo ezikwi-intanethi.
Kwi-mBLAST, sikholelwa ukuba ekuphela kwendlela yokulinganisa ifuthe lelizwi kukujonga izihloko kunye namagama aphambili abhalwa lilizwi. Uninzi lwezixhobo ezichonga abachaphazeliyo kwimarike zityeshela oku ngokupheleleyo, kwaye zabela amanqaku aphembelelekileyo generic kubantu ngaphandle kokuthathela ingqalelo le nto bayithethayo okanye banempembelelo kangakanani kwizihloko ezithandwa yimarike. Kuphela ngokufumana amazwi anempembelelo ekubhaleni izihloko ezibaluleke kubaphulaphuli bethu esinokuthi siqale ukusebenzisa la mazwi anempembelelo ukunceda ukufezekisa iinjongo zethu ezithile zentengiso. UGary Lee, CEO
Andikwazi ukuvumelana noGary ngaphezulu! Igunya kunye nobungcali banegunya elingaqalanga ngomntu, kodwa ngesihloko. Uninzi lweenkqubo kule mihla zilinganisa impembelelo kwinqanaba lomntu kunokuba kwinqanaba leengxoxo-ezenza ukuba kube nzima ukufumanisa abasemagunyeni bokwenyani. I-mBlast ibonakala ngathi inyathele kwi-algorithm enkulu enokuba luncedo kubathengisi ekujoliseni iinkokheli zeshishini.
Sebenzisa inkqubo efana ne-mPACT Pro, inkampani yobudlelwane noluntu okanye iarhente yokuthengisa inokuchonga abanokuba nefuthe kwaye ibasondele kumathuba ekujoliswe kuwo afanelekileyo kubaphulaphuli babo. Umzekelo, ndinganqwenela ukukhuthaza umsitho-ngokubeka nje igama eliphambili kwinkqubo kwaye uvelise uluhlu lwababhali, iibhlog, kunye neepundits zemidiya yoluntu abanokuthi ufuna ukubhala malunga nomsitho onje!
Siza kuphonononga inkqubo ye-mBlast ngakumbi!
Uyilo lweIntanethi yomsebenzisi: Izifundo ezivela kwisinyusi i-Indianapolis
Meyi 4, 2011 kwi-12: 56 PM
Lo ngumbono omkhulu. Ndiya kuba nomdla wokwenyani kwinto oyifumeneyo. Kuvakala ngathi umi ngokwenene emva kwalo mbono. Umi njani kwiKlout ngoku ibikhe yajikeleza okomzuzwana? Uyayithanda okanye uyayithiya?
Meyi 4, 2011 kwi-3: 10 PM
Ndihlala ndiwuxabisa umkhombandlela wokuba iKlout ithatha umzi-mveliso kodwa iyandikhathaza kakhulu into yokuba bekungekho mxholo kwizinga. Ngenxa yoko, ndiye ndakhethwa kwezinye zeenkampani uKlout asebenze nazo ukwenza 'i-buzz'. Enye yazo yayingumboniso kamabonwakude- eneneni bandithumelele ibhatyi kunye nekhonkco eliqhelekileyo lokujonga kuqala umboniso. Ingxaki… andiyibukeli iTV ngaphandle kwamaxwebhu kunye neendaba. Ke-impembelelo inokuba ibikhona, kodwa hayi ukubaluleka. I-mBlast ibonakala ngathi iguqula indlela-endiyithandayo.